वैज्ञानिकहरुले पानीबाट बनाए सुन ! – Butwal 24 News
August 5, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on वैज्ञानिकहरुले पानीबाट बनाए सुन !
२१ साउन, काठमाडौं । प्राचीन कालदेखि नै धातुहरु तथा रसायनहरुको मिश्रणबाट सुन बनाउने धेरै प्रयासहरु भएका छन् । विभिन्न अन्य धातुबाट सुन बनाउने यस्तो विधिलाई अल्केमी अर्थात् रस विधा भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुले अन्ततः यो विधामा पहिलो सफलता प्राप्त गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले पानीबाटै पहिलोपटक सुन बनाउन सफल भएका छन् ।